Iziganeko ezidlulileyo - Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Berlin, 12049 Germany Imikhombandlela
25.09.2021	NgoSeptemba 25, 2021	 - 24.01.2022	namhlanje
Nge-Okthobha 15, 2021 18:00 PM - 19: 00
'Iingoma zothando zenguquko' -iNtsebenzo kaCammack Lindsey | INDLELA
Itempile yeTempelhofer	Berlin
Ngokwentsebenzo yabo, uCammack Lindsey uza kucula ingqokelela yeengoma zothando zokuchasa kunye nenguquko, ezibandakanya amava ethu ekwabelwana ngawo wengcinezelo phantsi kongxowankulu abaxhaphazayo. Ukhetho luya kubandakanya iingoma ezibhalwe ngokwabo, kunye neengoma ezibakhuthazayo, ngethemba lokuba baya kukukhuthaza! // Isiganeko siqala ngo-18: 00 Bhalisa simahla [...]
Nge-Okthobha 8, 2021 16:30 PM - 18: 30
Nge-8th ka-Okthobha, siza kubhiyozela ukugqitywa komendo kwiTempelhofer Feld ejikeleze ufakelo kunye nepikniki edibeneyo kunye nabo bonke abathathi-nxaxheba. Amagcisa eFowuni evulekileyo- imvumi uMizgina Rengin kunye nomdlali weqonga uXueqing Yu, iiPlani zeAina, uElisa Kostka noJohanna Schmalöer baya kubonisa umdlalo wabo apho. // [...]
NgoSeptemba 26, 2021 18:30 PM - 21: 30
Njengenxalenye yenkqubo yeNdlela, umrepha u-Ebow (@ ebow.mp3) uza kwenza umdlalo othile kwindawo yakhe yokufaka iTempelhofer Feld. Sijonge ukukubona! // Isiganeko Qala i-18: 30 Bhalisela itikiti lakho lasimahla lokuthatha inxaxheba apha malunga ne-Ebow: Solo, kodwa nanjengelungu le [...]
NgoSeptemba 25, 2021 16:00 PM - 19: 00
Uyamenywa ukuba uthathe inxaxheba kwindibano ye-audiokalk edibeneyo yi-Autoplot iqela. Iprojekthi yabo "yamabali eeMephu" imalunga nokudlala nokudlala ukufikeleleka, uhlobo lwendlela ejongene nemibuzo yesazisi kunye neemeko zayo kwaye izama ukubenza babonakale kubathathi-nxaxheba abaninzi kangangoko. Ingqwalasela yomqondo [...]
Rhweba ngaphandle imicimbi njenge-iCal